Oliver Mtukudzi - Wikipedia
(Redirected from Tuku)
Oliver "Tuku" Mtukudzi muimbi wemuZimbabwe akaberekwa gore ra1952 muHarare. Muimbi uyu anodanwa nezita remusere rokuti Tuku
Nhoroondo yaTuku[chinja | edit source]
Mtukudzi akatanga kuimba mugore ra 1977 nechikwata Wagon of Wheels vari vese nomuimbi Thomas Mapfumo. Vakaimba rwiyo rwakaita mukurumbira rwainzi "Dzandimomotera". Mtukudzi akazobatana nechikwata chizviti Mahube, chaisangana vaimbi vekuchamhembe kweAfrica.
Mtukudzi ndiye mumwe wevaimbi vanemukurumbira muZimbabwe uye kunze kwenyika iyi. Akaberekwa kurudzi rweChiKorekore, ari wedzinza Nzou Samanyanga. Musambo wenziyo dzaanoimba unodanwa kunzi "Tuku Music". Mtukudzi akafamba nebasa rokuimba kumhiri kwemakungwa achisvika kunyika dzinosanganisira UK, US and Canada uko aiunganirwa nevanhu vazhinji.
Mumwaka uno wemamiriro ehupfumi nehutongi munyika yeZimbabwe, Tuku akaimba rwiyo rwunonzi "Ndakuvara". Rwiyo urwu rwunotaura pamusoro pekushungurudzwa kwevanhu zvichienderana nematongerwo enyika. Akatsikisawo rwumwe rwiyo "Bvuma Wasakara" rwunokurudzira vachembera kusiyira vechidiki mabasa nehutungamiri.
Oliver Mtukudzi ndiye mumwe wevaimbi vane mukurumbira muZimbabwe; vamwe vacho vanosanganisira Alick Macheso, Charles Charamba, Olivia Charamba, Pardon Mutsago, Mercy Mutsvene, Joyce Simeti nevamwewo.
Madambarefu aMtukudzi[chinja | edit source]
1978 Ndipeiwo Zano (yakatsikiswa zvakare 2000)
1980 Africa (yakatsikiswa zvakare 2000)
1992 Neria Soundtrack
1997 Ndega Zvangu (yakatsikiswa zvakare 2001)
2010 Kutsi Kwemoyo
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliver_Mtukudzi&oldid=63402"
This page was last edited on 4 Chivabvu 2019, at 21:07.